Alaabaa sirna RFDI: Mallattoo qixxummaa sabootaafi amantiilee
Alaabaa sirna RFDI: Mallattoo qixxummaa sabootaafi amantiilee Featured
Alaabaan mallattoo qixxummaa sabootaafi amantiilee biyya keenyaati
Odeeffannoon dhimma alaabaarratti Daayiraktoreetii Dhimmoota Kominikeeshiniifi Bulchiinsa Odeeffannoo Caffee Oromiyaarraa arganne akka ibsutti, sirnoota darban keessa yeroon saboonni, sablammoonniifi ummatoonni Itoophiyaa alaabaa biyyattii kan ofii godhatanii eenyummaa, afaan, duudhaafi amantiisaanii ittiin calaqqisiisan hinturre.
Sirna mootummaa Federalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa kanatti garuu saboonni, sablammoonniifi ummattoonni Itoophiyaa wareegama guddaa kaffaluun qixxummaa waan goonfataniif haala alaabaa biyyattii walqixxummaasaanii akkasumas, amantii mirkaneesse fudhatanii fayyadamaa jiru.
Guyyaan Alaabaa yeroo 10faf mataduree, “Mul'ata qabanneerra, injifannoo caaluuf kaaneerra” jedhuun Onkoloolessa 6 bara 2010 kabajamus dhugaadhuma kanaan waa'elchamee akka ta'eedha Koreen Kabaja Guyyaa Alaabaa Biyyaalessaa kan ibse.
Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataatti ministir de'eetaan ittiwaamamaa mootummaafi walittiqabaan koree teknikii kabaja Guyyaa Alaabaa, Obbo Amaanu'eel Abrahaam ibsa dheengadda gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti, Guyyaan Alaabaa waggoota darban kabajame hubannoo hawaasni biyyattii alaabaarratti qabu gabbiseera.
Guyyaan alaabaa baranaas heericharratti waliigalteen biyyaalessaa caalaatti akka uumamuuf mariilee paanaaliifi duudhaa gama kanaan jiru cimsuurratti xiyyeeffatamee kan kabajamu ta'uudha kan ibsan.
Labsii alaabaa bara 2001 baheen Guyyaan Alaabaa barri haaraan seenee Wixata lammaffaarratti kabajamaa akka tures yaadachiisanii, wayitiin kun yeroo miseensonni mana marichaa boqonnaarra jiran, akkasumas barattoonni guutummaatti gara mana barumsaatti hindeebine waan ta'eef Onkoloolessi seenee Wixata jalqabaatti akka kabajamu bara 2006 keessa deebiin tumamuusaa Obbo Amaanu'eel ni ibsu.
Guyyaan Alaabaa kun sadarkaa biyyaatti Onkoloolessa 6 bara 2010 Istaadiyoomii Finfinneetti bakka ummmanni magaalattiifi qondaaltonni mootummaa olaanoon argamanitti akka kabajamuufi sirni waadaa seenuufi alaabaa fannisuu kan raawwatamu ta'uus beeksisaniiru.
Naannoleefi bulchiinsonni magaalaas haaluma walfakkaatuun kan kabajan ta'uu Obbo Amaanu'eel eeranii, guyyichi waajiraalee mootummaatti mariidhaan, dhaabbilee barnootaatti, akkasumas miseensota raayyaa ittisaafi poolisiitiin darbees iddoo misiyoononni Itoophiyaa argamanitti sirna ho'aadhaan kan kabajamu ta'uu ibsaniiru.
Ennaa ayyaanichi kabajamu bu'aawwan heerichi biyya keenyaaf argamsiise kan yaadataman ta'uus himanii, raawwiin KGT 2fa guyyichaan dahachuun akka qoratamuufi karooricha waggoota sadan hafanitti hirmaannaa ummataa cimaadhaan milkeessuuf kallattiin kan kaa'amu ta'uu addeessaniiru.
Sadarkaa ogganaa ittaanaa waajjiratti Abbaa Adeemsa Hojii Ijoo Dhimmoota Kominikeeshiniifi Bulchiinsa Odeeffannoo Caffee Oromiyaa, Obbo Habtaamuu Damisee gamasaaniin ibsa barreeffamaan Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin, Guyyaa Alaabaa sadarkaa naannootti kabajamuuf koreewwan olaannoofi xixiqqaan hundaa’uusaaniifi karoorri ittiin gaggeeffamanis qophaa’ee orenteeshiniin kennamuusaa ibsaniiru.
Alaabaan biyya keenyaa amma jiru walqixxummaa saboota, sablammootaafi ummattootaa akkasumas walqixxummaa amantiilee kan ibsu ta'uu kan eeran Obbo Habtaamuun, alaabichi utubaawwan heera keenyaa keessaa isa tokko jedhaniiru.
Sirnoota darban keessatti alaabaan walqixxummaa sabootaa, sablammootaafi ummattootaa akkasumas amantii kan ibsu osoo hintaane, kan olaantummaan saba tokkoofi amantii tokkoo calaqqisu godhamee fudhatamaa turuusaas yaadachiisaniiru.
Asxaan alaabaa biyyoolessaa gidduutti argamus walqixxummaa sabootaa, sablammootaafi ummattootaa akkasumas amantiiwwanii kan mirkaneessu ta’uus Obbo Habtaamuun ibsanii, asxaa kanarraas mallattoon eenyummaa, aadaa, afaaniifi amantii sablammoota kanneenii kan maddu ta'uu eeraniiru. Bu'aaleen kunniin hundi sirna federaalawaa hordofaa jirruuf bu’uura jedhaniiru.
Tokkummaan dimokraasiifi mul’anni gaariin ummatoota Itoophiyaatiin uumamaa jiru kana sirriitti ibsuuf (agarsiisuf) utubaalee heera keenyaarratti hubannoo walfakkaataa uumuuf guyyichi faayidaa olaanaa qaba jedhaniiru.
Qormaatilee keessa darbameefi injifannoo amma irra gahame eeganii sirnaan ittifufsiisuu keessatti gaheen dargaggootaa olaanaa waan ta'eef kutaa hawaasaa kana wajjin mariin kan geggeeffamu ta'uus Obbo Habtaamuun ibsaniiru.
Torban kana/This_Week 33772
Guyyaa mara/All_Days 1625567